यसरी गर्नुहोस् आफै खोकी र यसको घरेलु उपचार
अक्टोबर 10, 2018 अगस्ट 27, 2019 साइन्स इन्फोटेक	10 Comments	डा. राम बहादुर बोहरा
स्वाश नलीको मार्गमा कुनै किसिमको अवरोध आएमा सोको प्रतिक्रिया स्वरुप खोकी लाग्ने गर्दछ । खोकी लाग्नुको प्रमुख कारणहरुमा घाँटी वा फोक्सोको भित्री भागमा ईन्फेकशन हुनु हो । फेरिगंस (कठंनलि) लेरिगंस (स्वरनलि), ब्रोकंस, लेफ्ट र राईट ट्रेकिया, फोक्सोमा जब कुनैप्रकारको ईन्फेक्शन हुन्छ तब मानिसलाई खोकी लाग्न थाल्छ ।
खोकीलाई हामीले सामान्य रूपमा हेर्ने गर्छौ । एउटा उखान छ रोगको जड खोकी हो भने लडाइको जड हासो भन्ने चलन छ । खोकी पुरानो हुदै गएमा दम ,टि.बि जस्ता रोगले कालान्तरमा मानीसलाई हुने गर्दछ । खोकी दुई प्रकारको हुन्छ एउटा कफयुक्त र अर्को सुख्खा । आज हामीले दुबै किसिमको खोकीको उपचार घरेलु औषधिबाट गर्ने तरिका’bout जानकारी दिनेछौं ।
अदुवामा खोकी तथा चिसो भगाउने प्राकृतिक गुण नै हुन्छ । यसले घाँटीभित्र हुने संक्रमणलाई पनि कम गर्छ । यसमा पर्याप्त मात्रामा एन्टी अक्सिडेन्ट पाइन्छ र एन्टी भाइरल तथा एन्टी ब्याक्टेरियल औषधिको काम गर्छ ।
अदुवामा ओलेओरेसिन नामको एक यौगिक पाइन्छ जसले खोकी तथा चिसोको समस्या हटाउनमा लाभदायक हुन्छ । मह पनि औषधिय गुणले युक्त हुन्छ । यसमा एन्टीअक्सिडेन्टका साथै जिवाणु प्रतिरोधी गुण हुन्छ र संक्रमणबाट बचाउने काम गर्दछ ।
१. यसका लागि तपाइँलाई अदुवा, मह र कागती तथा पानी आवश्यक पर्दछ । सबैभन्दा पहिले अदुवालाई सफा गरेर बोक्रा छिलेर टुक्रा टुक्रा पारेर काट्नुस् । एउटा कागती निचोरेर रस निकाल्नुहोस् । एउटा भाँडोमा एक कप पानी तताउनुहोस् । त्यसमा टुक्रा पारेको अलिकति अदुवा तथा आधा चम्चा कागतीको रस मिसाउनुहोस् । हल्का पकाई सकेपछि लाष्टमा मह मिस्रण गरेर बिरामीलाई एक एक चमचको दरले दिनमा ३ पटक खान दिनुस निको हुन्छ ।
२. अदुवालाई पोल्नुहोस र त्यो अदुवामा मिस्री मिलाएर चुस्नुहोस खोकी निको हुन्छ ।
३. असुरोको पात मन्टालाई ल्याउनुहोस सफाकपडामा राखेर बाध्नुहोस बाधेको कपडालाई नडढ्ने गरी रातो माटोले बाहिर बाट बाक्लो लगाएर खरानी तल दवाउनुहोस । पछि निकालेर सवै फाली पातलाई निचोरी रस निकाल्नुहोस निकालेको रसमा थोरै मह मिलाएर चटाउनु होस खोकी निको हुन्छ ।
← फिटकिरी र यसको प्रयोग
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको उतार चढावको हिजोदेखि आजसम्मको ईतिहास →
सेप्टेम्बर 12, 2018 सेप्टेम्बर 12, 2018 साइन्स इन्फोटेक	0
सेप्टेम्बर 4, 2019 सेप्टेम्बर 4, 2019 साइन्स इन्फोटेक	7
सेप्टेम्बर 27, 2018 साइन्स इन्फोटेक	5
10 thoughts on “खोकी र यसको घरेलु उपचार”
Pingback:	निमोनियावारे एक जानकारी
Pingback:	ग्याष्ट्रिकको घरेलु उपचार
Pingback:	यस्तो छ थाहा पाउनुहोस् रुघाखोकीको घरेलु उपचार
Pingback:	दमको कारण र उपचार
Pingback:	यस्तो छ थाहा पाउनुहोस् गुरूको अर्थ र परिभाषा
Pingback:	दमको रोग र ईसबगोल भुसि
Pingback:	चिसोमा रूघा (Cold) र यसको उपचार
Pingback:	धनवन्तरीका अनुसार उपचार पद्धतिको पाँच चरणहरु
Pingback:	खोकी (Cough) र यसको उपचार
Pingback:	खोकीको घरेलु उपचार